"မိဘ၊ အဖိုးအဖွားတွေအပေါ် သိတတ်တဲ့သူတွေသာ ရမယ့် ကံကောင်းခြင်း (၅) မျိုး" - BaHuThuTaGabar
“မိဘ၊ အဖိုးအဖွားတွေအပေါ် သိတတ်တဲ့သူတွေသာ ရမယ့် ကံကောင်းခြင်း (၅) မျိုး”
June 12, 2019 admin အထွေထွေဗဟုသုတ 0
လူကြီးမိဘတွေကို သိတတ်လိမ္မာရင် ကံကောင်းမယ်ဆိုတာ တော်တော်များများ ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း တကယ်လုပ်တဲ့သူကတော့ နည်းပါတယ်။
တကယ်စိတ်ရင်း အမှန်နဲ့ မိဘ၊ အဖိုးအဖွားတွေအပေါ်ကို သိတတ်တဲ့ သူတွေ ရရှိမယ့် ကံကောင်းခြင်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် နော် …….
(၁) လမ်းမမှားတော့ဘူး ”
မိဘ၊ အဖိုးအဖွားတွေဆိုတာ လူ့လောကအကြောင်းကို အများကြီး နားလည်ပြီးတဲ့သူတွေပါ။ ဒါကြောင့် သူတို့ပေးတဲ့ အကြံဥာဏ်တွေ၊ သူတို့ရဲ့ ပြောစကားကို နားထောင်ခြင်းဖြင့် လမ်းမှားကိုရောက်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မိဘ၊ အဖိုးအဖွားတွေက မှန်ကန်တဲ့လမ်းတွေကို ညွှန်ပြပေးနိုင်တဲ့ မီးအိမ်ရှင်တွေပဲ ဖြစ်ပါ တယ် …။
(၂) အောင်မြင်မယ် ”
မိဘ၊ အဖိုးအဖွားတွေကို သိတတ်တဲ့သူ၊ ရိုသေတဲ့သူတွေဟာ အောင်မြင်မှုကို ရရှိကြပါတယ်။ ကံကောင်းခြင်းတွေက သူတို့နောက်ကို အမြဲလိုက်နေပြီး ကြံတိုင်းအောင်၊ လုပ်သမျှမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အသီးအပွင့်တွေကို တွေ့မြင်ရကြပါတယ် …။
(၃) လူချစ်လူခင်ပေါမယ် ”
မိဘ၊ အဖိုးအဖွားတွေကို သိတတ်တဲ့သူတွေဟာ လူချစ်လူခင်ပေါများကြပါတယ်။ ရောက်လေရမှာ ကူညီမယ့်သူ၊ အားပေးမယ့်သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံကြပါတယ်။ ဒါတင်မကပဲ ကိုယ့်အပေါ် တကယ်ကောင်းတဲ့ လက်တွဲဖော်၊ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရမှာပါ …။
(၄) အသက်ရှည်မယ် ”
မိဘ၊ အဖိုးအဖွားတွေကို သိတတ်ပြီး ရိုသေတဲ့သူတွေဟာ အသက်ရှည်ခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်းဆုလာဘ်ကို ရရှိကြပါတယ်။ ရောဂါဘယတွေ ကင်းစင်ပြီး စိတ်ပျိုကိုယ်နုတဲ့အပြင် အသက်ရှည်ပြီး အိုဇာတာလည်း ကောင်းတတ်ကြပါတယ် …။
(၅) ကံကောင်းနေမယ် ”
မိဘ၊ အဖိုးအဖွားတွေကို ရိုသေပြီး သိတတ်တဲ့သူတွေဟာ ရောက်လေရာမှာ ကံကောင်းကြပါတယ်။ ဘာပဲလုပ်လုပ် သူများတွေထက် သာလွန်ကြပြီး အမြဲလိုလို ကံကောင်းနေမှာပါ။ ဘေးမသီရန်မခဘဲ လိုရာခရီးပန်းတိုင်ကို ရောက်နိုင်ကြသလို၊ အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်နဲ့ ကံကောင်းစွာ နေထိုင်ကြရမှာပါ နော် …။ ။
“မိဘ၊ အဖိုးအဖှားတှအေပျေါ သိတတျတဲ့သူတှသော ရမယျ့ ကံကောငျးခွငျး (၅) မြိုး”
လူကွီးမိဘတှကေို သိတတျလိမ်မာရငျ ကံကောငျးမယျဆိုတာ တျောတျောမြားမြား ကွားဖူးကွမှာပါ။ ဒါပမေယျ့လညျး တကယျလုပျတဲ့သူကတော့ နညျးပါတယျ။
တကယျစိတျရငျး အမှနျနဲ့ မိဘ၊ အဖိုးအဖှားတှအေပျေါကို သိတတျတဲ့ သူတှေ ရရှိမယျ့ ကံကောငျးခွငျးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ နျော …….
(၁) လမျးမမှားတော့ဘူး ”
မိဘ၊ အဖိုးအဖှားတှဆေိုတာ လူ့လောကအကွောငျးကို အမြားကွီး နားလညျပွီးတဲ့သူတှပေါ။ ဒါကွောငျ့ သူတို့ပေးတဲ့ အကွံဉာဏျတှေ၊ သူတို့ရဲ့ ပွောစကားကို နားထောငျခွငျးဖွငျ့ လမျးမှားကိုရောကျတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ မိဘ၊ အဖိုးအဖှားတှကေ မှနျကနျတဲ့လမျးတှကေို ညှနျပွပေးနိုငျတဲ့ မီးအိမျရှငျတှပေဲ ဖွဈပါ တယျ …။
(၂) အောငျမွငျမယျ ”
မိဘ၊ အဖိုးအဖှားတှကေို သိတတျတဲ့သူ၊ ရိုသတေဲ့သူတှဟော အောငျမွငျမှုကို ရရှိကွပါတယျ။ ကံကောငျးခွငျးတှကေ သူတို့နောကျကို အမွဲလိုကျနပွေီး ကွံတိုငျးအောငျ၊ လုပျသမြှမှာ ကောငျးမှနျတဲ့ အသီးအပှငျ့တှကေို တှမွေ့ငျရကွပါတယျ …။
(၃) လူခဈြလူခငျပေါမယျ ”
မိဘ၊ အဖိုးအဖှားတှကေို သိတတျတဲ့သူတှဟော လူခဈြလူခငျပေါမြားကွပါတယျ။ ရောကျလရေမှာ ကူညီမယျ့သူ၊ အားပေးမယျ့သူတှနေဲ့ တှဆေုံ့ကွပါတယျ။ ဒါတငျမကပဲ ကိုယျ့အပျေါ တကယျကောငျးတဲ့ လကျတှဲဖျော၊ သူငယျခငျြး၊ မိတျဆှကေောငျးတှနေဲ့ တှဆေုံ့ရမှာပါ …။
(၄) အသကျရှညျမယျ ”
မိဘ၊ အဖိုးအဖှားတှကေို သိတတျပွီး ရိုသတေဲ့သူတှဟော အသကျရှညျခွငျး၊ ကနျြးမာခွငျးဆုလာဘျကို ရရှိကွပါတယျ။ ရောဂါဘယတှေ ကငျးစငျပွီး စိတျပြိုကိုယျနုတဲ့အပွငျ အသကျရှညျပွီး အိုဇာတာလညျး ကောငျးတတျကွပါတယျ …။
(၅) ကံကောငျးနမေယျ ”
မိဘ၊ အဖိုးအဖှားတှကေို ရိုသပွေီး သိတတျတဲ့သူတှဟော ရောကျလရောမှာ ကံကောငျးကွပါတယျ။ ဘာပဲလုပျလုပျ သူမြားတှထေကျ သာလှနျကွပွီး အမွဲလိုလို ကံကောငျးနမှောပါ။ ဘေးမသီရနျမခဘဲ လိုရာခရီးပနျးတိုငျကို ရောကျနိုငျကွသလို၊ အဆငျ့အတနျးမွငျ့မွငျ့နဲ့ ကံကောငျးစှာ နထေိုငျကွရမှာပါ နျော …။ ။
“ကျောက်တောင်ပေါ်က ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့… ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီး နှင့်… သံသယ အဖြစ်ရဆုံး… ခင်ပွန်းသည် ၏ ..လုပ်ရပ်”
“အသက် ၂၀ မှာ တစ်ယောက်တည်းနေသင့်သည့် အကြောင်းရင်း (၈) ချက်…”